Kulukhuni ukukhulelwa kwabesifazane abasebenza kanzima – Umbiko | News24
Kulukhuni ukukhulelwa kwabesifazane abasebenza kanzima – Umbiko
Boston - Ucwaningo lwaseMelika luveze ukuthi abesifazane abasebenza amahora angaphezulu kuka-40 ngesonto nalabo abasebenza ngokuthwala izinto ezisindayo bathatha isikhathi eside ukuba bakhulelwe.
Abacwaningi balandele abantu besifazane abangu-1 739 abebezama ukukhulelwa kanti u-16% kubona uhlulekile ukukhulelwa ezinyangeni ezingu-12, kanti u-5% kwaze kwaphela iminyaka emibili ungakhulelwa.
OLUNYE UDABA: Ezintsha ngamaphilisi avimba ukukhulelwa
Kuthiwa ukusebenza amahora angaphezulu kuka-40 ngeviki kuyamaniswa nokuthatha isikhathi eside ukukhulelwa kwabesifazane, uma kuqhathaniswa nabasebenza amahora angu-21 kuya kwangu-40.
Ukuqukula izinto ezisindayo nakho kunomthelela ekutheni luhambe kancane uhlelo lokuzama ukukhulelwa.
"Ucwaningo lwethu lutshengisa ukuthi ukuqukula izinto ezisindayo nokusebenza amahora amade, kunomthelela ekuhambeni kancane kokukhulelwa kwabesifazane,” kusho obehola lolu cwaningo u-Audrey Gaskins, weHarvard T.H. Chan School of Public Health.
Houses R 5 490 000